Ny fiantraikan'ny tontolo iainana amin'ny SPAM | Martech Zone
Ireo olona ao amin'ny WebpageFX isan-kerinandro natambatra ny infographic manazava ny vidin'ny tontolo iainana amin'ny SPAM. Nanoratra momba izany aho SPAM sy ny indostrian'ny mailaka… Ary mbola gaga ihany aho fa tsy nisy olona nandroso tamin'ny ady amin'ny SPAM.
Raha toa ny ISP toa an'i Google, Yahoo! ary tena te-hanafoana ny tenan'izy ireo amin'ny SPAM i Microsoft, hanolotra adiresy mailaka voaaro izy ireo amin'ny alàlan'ny ISP (Internet Service Provider) mifehy ny metodologie opt-in fa tsy ny ESP (Provider Service email). Io dia hahafahan'izy ireo manakana loharano hafa. Saingy indrisy… raikitra amin'ny rafitra 20 taona isika izay toa tsy hivoatra ato ho ato.